Ukuthi ngithanda ukushaya” – u-Wolvaardt
Laura Wolvaardt in action against England during the ICC Women's World Cup. (Photo by Harry Trump-IDI/IDI via Getty Images)
Umdlali oneminyaka engu-18 u-Laura Wolvaardt usakholwa ukuthi kusakuningi adinga ukukufunda kanye nokusebenza kukona uma efuna ukuba oyedwa wabashayayo abahamba phambili emhlabeni.
Ofunda umatikuletsheni futhi oyi-head girl e-Pinelands High School eKapa wahlanganisa imiphumela emine edlulile ku-50 futhi nokukodwa oku-48 engaphumile edlalela ama-Momentum Proteas ngesikhathi sendebe yomhlaba ye-ICC ngo-2017. Wabalwa njengomshayi oyedwa ovulayo kwiqembu lomqhudelwano futhi wathola ama-runs amaningi eqenjini lase-South Africa (324) futhi uzimisele ukwenza okuningi ukuze abengcono.
“Njengoba kube indebe yomhlaba yami yokuqala, bengazi ukuthi ngizohlangana nani ngakho angingenanga kukhona engikulindele,” kusho u-Wolvaardt. “Ngaba nesikhathi esihle, ngicabanga ukuthi iqembu ladlala kahle lokho kwakukuhle ukubona. Ngazama ukungayicabangi incindezi yendebe yomhlaba kakhulu, ngagxila kulokhu okwakumele ngikwenze ngokushaya, enkundleni futhi kwangisebenzela kahle. Kubi ukuthi iqembu lahluleka eduzane nama-semi, kodwa ikhilikithi leyo, kuyenzeka, kodwa ngithemba ukuthi senza wonke umuntu ekhaya aziqhenye.”
Lomdlali omncane ukukhonze kakhulu ukushaya futhi ujwayele ukukhishwa uma kuqeqeshwa kuma-net uma esefinyelelile kuma-overs akhe, kodwa akagcabangi ukuthi uyoke aneliseke.
“Ukushaya ngangikwenza sakudlala ngisakhula. Yinto engithandayo ukuyenza, indlela engakhipha ngayo ukukhathazeka emuva kwesikole, indlela engikhululeka ngayo uma kungekho engingakwenza, ngiyakuthanda nje ukushaya,” esho eqhubeka.
Uma ebheka kwindebe yomhlaba kanye nomqhudelwano abenawo, u-Wolvaardt ubala ukungalihlanganisi ikhulu kumqhudelwano njengento angayithandanga futhi ufuna ukusebenza ekuphenduleni o-fifty bakhe ibemkhulu.
“Ngaba namathuba ambalwa lapho okwakumele ngiphushe khona kodwa angikwenzanga ngakho ngisaphatheke kabi ngendlela engadlala ngayo. Kodwa indebe yomhlaba ilethe isipiliyoni esimangazayo futhi ngicabanga ukuthi ngifunde okuningi njengomdlali wekhilikithi kanye noshayayo. Ngifunde okuningi kubadlali abakhulile ngokuthi udlala ngayo kwisimo, ukuthi ama-wicket ashintsha kanjani kanye nendlela yokujwayela. Bekuyisipiliyoni esihle sokufunda kimina futhi ngikubhekile ukusebenzisa izinto engizifundile uma ithuba lifika.”
Okulandelayo kumdlali omncane ukufica umsebenzi wesikole kanye nokufundela ama-peliminary kanye nezivivinyo zokugcina. Uthando lwakhe lokufundela ubudokotela kanye nokubhalisa emanyuvesi ambalwa e-South Africa bekukhulunywa ngakho ngesikhathi somqhudelwano, kodwa u-Wolvaardt uthi kuningi okusamele akucabange ngekusasa lakhe. Khona, uzofunda aphinde adlale ikhilikithi, kodwa uyazi ngobunzima baleyondlela.
“Impendulo yami ayishintshile ngoba akukho okuvelile ngalokho,” ehleka. “Angazi ukuthi ngifuna ukwenzani. Ngisalindele ukuzwa kumanyuvesi futhi sengizwile, ngizothatha isinqumo sokuthi ngiyafunda noma ngithatha unyaka. Izindaba ezimnandi ukuthi, ngisasemncane futhi nginesikhathi esiningi ukwenza kokubili futhi abazali bami bayangeseka noma ngithatha kuphi.”
AmaProteas esifazane anezinombolo ezincomekayo i-CSA ihalalisela amaProteas amathathu ngokufakwa eqenjini le-ICC WWC iCSA incoma amaMomentum Proteas ngomqhudelwano wawo wendebe yomhlaba ongakhohlakali i-England ihlula amaProteas women ukungena kwi-final yomqhudelwano wendebe yomhlaba AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba AmaProteas esifazane abheke ukusondela kuma-semi endebe yomhlaba